Guddiga Difaaca oo Raiisal Wasaaraha kala hadlay xiisadaha ka taagan Magaalada Baled Xaawo | Maalmahanews
Guddiga Difaaca oo Raiisal Wasaaraha kala hadlay xiisadaha ka taagan Magaalada Baled Xaawo
March 25, 2018 - Written by admin
Iyadoo xiisad ay ka taagan tahay Magaalada Baled Xaawo ee Gobolka Gedo, islamarkaana xiisadaasi ay ka dhalatay xadgudub dowladda Kenya dhanka xuduuda ay ku soo sameysya, ayaa guddiga difaaca arrintaasi wuxuu kala hadlay Xukuumadda Somaliya.
Xildhibaan Sadiiq Warfaa oo ka tirsan Guddiga Difaaca Baarlamaanka, ayaa sheegay kulan gaar ah xalay inay la qaateen Ra’iisul Wasaaraha Somaliya iyo xubno ka tirsan Wasiiradiisa.
Kulanka ayaa xubnaha Guddiga Difaaca waxa ay warbixin ugu gudbiyeen Ra’iisul Wasaaraha Somaliya, waxayna u sheegeen in shacabka Degmada Baled Xaawo ay u soo gudbiyeen xaaladda ka taagan Magaalada iyo xadgudubka Kenya ay ku soo sameysay xuduuda.
Wuxuu sheegay Xildhibaan Sadiiq Warfaa in arrintaan loo xil saaray guddi laba dhinac ah oo ka shaqeyn doona sidii warbixin xaqiiqo ah looga soo gudbin lahaa xiisada ka taagan Baled Xaawo.
“Cabashadii shacabka naga soo gaartay, ayaan u gudbinay Ra’iisul Wasaaraha oo si wanaagsan nooga dhageystay, marka waxa waaye arrintaan guddi ayaa loo saarayaa oo arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda isugu jira, anagana Guddiga difaaca aan qayb ka nahay, waxaan rajeynayaa in xal laga keeno.” Ayuu yiri Xildhibaan Sadiiq Warfaa.
Xukuumadda Somaliya ayaa lagu wadaa inay go’aan ka soo saarto xaaladaha ka jira Magaalada Baled Xaawo, halkaasi oo la filaayo wafdi dowladda ka socda in loo diro.